Paul Pogba oo tijaabada caafimaad u maraya kooxda Manchester United – Calan Qaran
August 8, 2016	by Shakra Hussein
Paul Pogba ayaa soo gaaray garoonka Manchester United si uu u maro tijaabada caafimaad ee kooxda Man United uu ugu biirayo kooxda Juventus.
Ciyaaryahanka qadka dhex ee u ciyaara qaranka Faransiiska ayaa ka soo duulay magaalada Nice isagoo ka degey garoonka diyaaradaha ee magaalada Manchester waxana uu gaaray garoonka tababarka ee kooxda.
United ayaa waxa ay ku iibsatay lacag gaareysa 105 malyan oo Euro ciyaaryahan Pogba iyo weliba qarashaadka kale ee la xiriira gunada iyo lacago kale.
Heshiiska 23-jirkan ayaa ugaga tagay kooxda Man United £1.5m sanadkii 2012 waxaana la filayaa in toddobaadkan la soo dhamaystiro heshiiska.
Ku soo laabatshada Man United ayaa waxa uu Pogba dhaafay rikoorkii hore ugu yiil caalamka ee gareth Bale oo £85m ugu biirey kooxda Real Madrid sanadkii 2013.
Kadib kulankii ay Man United ugu guuleysatay 2-1 kooxda Leicester koobka Community Shield ayuu tababare Mourinho waxa uu sheegay in uu gacmo furan ku soo dhoweynayo Pogba.
“Waxa uu si wanaagsan u yaqaan kooxda,ciyaartoyda kooxda waxana uu doonayaa in ka qeyb qaato mashruuca weyn ee ay kooxdu wado.”
Afar xilli ciyaareed ayuu Pogba ka caawiyay Juventus inay ku guuleysato afar horyaal oo Seria A iyo weliba in xulka Faransiiska uu gaaro finalka tartanka Euro 2016.
Paul Pogba ayaa noqday ciyaaryahankii afaraad ee uu Mourinho keeno United, waxaa kamid ahaa daafaca reer Ivory Coast ee Eric Bailly,weeraryahanka reer Sweden Zlatan Ibrhimovic iyoweeraryahanka Armenia Henrikh Mkhitaryan.
Waa markii ugu horeysay muddo labaatan sano ah ee koox ka dhisan dalka Ingiriiska ay ku soo iibsato ciyaaryahan lacag rikoorka caalamka ah, iyado ay ahayd markii ugu dambeysay ee kooxda Newcastle United ay ku iibsatay lacag gaareysa £15m.
Pogba ayaa markii ugu horeysay waxa uu ku biiray United sanadkii 2009 isagoo ka soo tegey kooxda ka dhisan dalka Faransiiska Le Havre isagoo 16 sano jir ah, balse lama safin kulamo badan illaa uu ka dhaco heshiiska uu kooxda kula joogay oo ku ekaa July 2012.
Ciyaaryahankan ayaa 178 kulan u saftay kooxda Juventus isagoo u dhaliyay 34 gool waxana uu ka caawiyay inay gaarto Juventus ciyaarta finalka ee Champion League 2015. Kooxda Serie A ayaa heshisi cusub u soo bandhigtay halka Real Madrid ay aad u xiiseynaysay ciyaaryahankan qadka dhexe.
Hase yeeshee Pogba ayaa sheegay in sababaha uu ugaga tegey United ay ahayd in tababarihii hore Alex Ferguson uusan ciyaarsiin taasina uu aad ugu wareeray safasho la’aanta.
Balse,Ferguson ayaa sheegay in uu ka aamin baxay wakiilka Pogba ee Mino Raiola, waxana uu ku eedeeyay in uu si qarsoodi ah ula heshiiyay Juventus.
Koobka Fedraalka oo Muqdisho ka socda (Benadir 5-0 K/G) July 16, 2016